ArcGuments-ka Meelaha Aan Joogtada Ahayn - Geofumadas
Oktoobar, 2009 ArcGIS-ESRI, Leisure / waxyi
Laakiin waa markii ugu horeysay ee aan ku arko adigaan helay aragti ah sawir qaababkaaga ayaa ka baxay heerkaygii, malaha sababtoo ah koobkii ugu horeeyey ee ay i tuseen si aad ah ayaa loo caddeeyey in aad dhadhankaaga; Waxaan xitaa u maleynayay inay ahayd geopdf tan iyo maalmahaas. Kadibna waxaan ku wareersanahay aasaaska aasaasiga ah rgb adiga calaamadaha, taasi waa sababta aan ugu dhiirigeliyay in aan sahamiyo aragtida mapka oo aan ogaado in aadan u muuqan mid aad u adag.
Way adag tahay in la fahmo inta aad doorbidayso inaad xididdadaada ka gooyo ariiga Advent, waxaad iska dhigtay inaad u guurto Avenue iyo badhkii aad ku bixisay qaabeeya faylasha in aan ku raaxeysto todobaad kasta ... wax kasta oo kasta ha noqotee kordhin oo aan isticmaalnay feyl la mid ah magac isku mid ah iyo saddex waraaqo ka dib muddada ... illaa iyo markii aan degnay niyad jabkii prg.
Maya, waa arrimuhu had iyo jeer ma aha kuwo dhib badan, laakiin waxaan ahay daacad, qaar ka mid ah shuruudahaaga topoloji hadda waxay ka baxeen qof kasta oo dhiman, ka hor intaanan ku xallineynin siyaabo kale ... laakiin maaha ... oo keliya geodatabase iyo in ay cliché in wax kasta waa ganacsi i burburiyey. Haa waan jeclahay kanaga cusub fasalada muqaalka, adiga domains, waxaad u egtahay muuqaal qurux badan gaar ahaan markaad aragto inaan heeso dhoola cadeynaya nostalgia ... taas oo ah usbuucii ugu horeysay, markii aan ka soo baxnay faylka dheeriga ah ee mrsid. Kadib kalsooni si fiican u xaday fikradda laakiin waxaan ka maqnaanayaa sida fudud ee heerarka ugu sarreeya mdtIyadoo reysashada iyada oo aan loo dulqaadan karin laakiin aan la jilcin si aad u daran.
Maya, marwalba ma seegayo aragti, waxa dhacaya waa in hadda aad qiimo ku leedahay wax walba WMS way ku adkaataa, ma fileynin wax ka yar adeegyada adeegyada iyo kor 1.03. Maya, heerarka OGC Anigu ma ixtiraama, xitaa haddii aan ku qasbanahay inaan tago Arcms, jebiso qoyskayga ArcObjects oo ka dhiga tunnel ArcSDE; haddi aad ku ballanqaadeyso in aad si toos ah uga shaqeyn doonto saldhiga Oracle 10g.
Aniga? Waxaan doorbidaa C # .NET y hayalka san, Pyton si aanay i illoobin, JDK markaa qeybta kale ma oga. Wax culus kuma jiraan desktop-ka, wax walba oo ka server ee hirgelinta astaanta iyo waan ku qanacsanahay, inkastoo aan sidoo kale la shaqeyno tartanka, nasiib wanaag, laakiin halkan naga mid ah, Acer waxaan haystaa Qgis la qaadan karo in la xusuusto in hal maalin oo dunida ah gelinno 16.
Maya, ma filayo waxa aan noqon karin. Fiican
Post Previous" Hore Qiimaha barnaamijka
Post Next Abaalmarinta 2009Next »